Indlela yokoyisa ukuphela kobudlelwane ▷ ➡️
Ungoyisa njani ukuphela kobudlelwane. Ukoyisa ukuphela kobudlelwane akukho lula, ngakumbi ukuba sohlulwe emntwini esabelana naye ngamava kunye neemvakalelo zethu ixesha elide. Ngapha koko, uninzi lwabantu luphela lusiya kwisazi ngengqondo ngesi sizathu. Nangona kunjalo, kukho iindlela ezinokuthi kukunceda wenze iintlungu iqabane lakho eliqhelekileyo.
Kufuneka siyiqonde loo nto iintlungu aziyi kunyuka ngobusuku. Kananjalo asinakulibala msinyane umntu esichithe ixesha elininzi naye. Nangona kunjalo, kufuneka yazi ukuba asinakubambeka kule meko, kwaye ke, kufuneka senze eyethu indima ukuqhubela phambili.
Ukuze ufunde fikelela esiphelweni sobudlelwane, Siza kukunika uthotho lwe iingcebiso oko kuyakuvumela ukuba uphume kancinci kancinci kule meko ibuhlungu. Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo apha ngasentla, kubalulekile ukuba yenza umzamo kwaye ube nesimo sengqondo esihle.
1 Ungasoyisa njani isiphelo sobudlelwane ngenyathelo ngenyathelo
1.1 1. Guqula indlela ocinga ngayo
1.2 2. Thatha amanyathelo
2 Iingcebiso ezi-6 zokoyisa ukuphela kobudlelwane
Ungasoyisa njani isiphelo sobudlelwane ngenyathelo ngenyathelo
ukuba fikelela esiphelweni sobudlelwaneKufuneka sijolise kwizinto ezimbini ezisisiseko:
Guqula into yengqondo
Guqula indlela esicinga ngayo, kunye nezenzo zethu, kufuna umgudu omkhulu, kodwa kuphela kwendlela yokujongana nokuphela kobudlelwane.
Siza kuchaza nganye ngezantsi.
1. Guqula indlela ocinga ngayo
Into yokuqala ekufuneka siyenzile utshintsho yindlela yethu yokucinga. Xa iingcinga zethu zingenanto, bayasenzakalisa endaweni yokusinceda kwaye bandise iintlungu zethu.
Los iingcinga ezimbi zibonakaliswa ngeendlela ezahlukeneyo njani: Sicinga ukuba asinakuze simfumane omnye umntu, yonke into ibangelwe nguwe, uziva ngathi uchithe ixesha okanye uziva uqhathiwe, njl.
Ezi ntlobo zeengcinga zixhaphakile kubantu abaninzi abachitha ubudlelwane babo, nangona kunjalo baphosakele ngokupheleleyo kwaye abanamsebenzi, kuba akukho mava yinkcitha xesha kwaye kuyakuhlala kukho umntu ozimisele ukudibana nawe kwaye uyamazi.
Kuqheleke kakhulu ukucinga ukuba iqabane lakho likhetheke kangangokuba awuyi kufumana mntu ngokufanayo. Nangona kunjalo, le yenye ingcinga engalunganga engenanto yakwenza nenyani. Kukho izigidi zabantu kwi el mundo kwaye zonke zizodwa. Ekuphela kwento oyifunayo vula ingqondo nentliziyo yakho ukuze uyiqonde.
Okokugqibela, sicebisa ukuba ungaqali ubudlelwane emva kokuphela komnyenjengoko kuthatha ixesha ukupholisa amanxeba kunye nokwakha kwakhona. Enye indlela, iintlungu zingaphela zingaphezulu.
2. Thatha amanyathelo
Ukuba ufikelele kweli nqanaba ngempumelelo kwaye wakwazi ukutshintsha indlela ocinga ngayo, ngoku kunyanzelekile ukuba Thatha inyathelo kwaye uqalise ukwakha kwakhona. Ngale nto sicebisa ukuba uzibuze le mibuzo ilandelayo:
Uceba ukwenza ntoni ukusukela ngoku?
Ufuna ukwenza ntoni ngekamva lakho?
Ufuna ukuzikhumbula njani kule meko? Ngaba uyafuna ukuhlala ebhedini ulila okanye ukhetha ukuphuma uzonwabise?
Njengoko uAlbert Einstein wathi: «Embindini wobunzima kukho ithuba«. Oku kuthetha ukuba Kuya kufuneka uthathele ingqalelo amathuba okwahlukana neqabane lakho. Ngaphandle kokuya phambili, unganalo ixesha elingakumbi, oku kuthetha ukuba unako yenza izinto ozifunayo, kodwa khange ulifumane ixesha. Ke ngoko, lixesha lokuba uzibekele imiceli mngeni emitsha, uzalisekise iiprojekthi ongakhange uzigqibe, udibane nabantu abatsha, uchithe ixesha elininzi nosapho kunye nabahlobo bakho, wenze umthambo, utye usempilweni, ufunde ngakumbi okanye uhambe.
Recuerda que olu lwalamano ayisiyiyo kuphela oluya kuba nayo ebomini bakho. Ke ngoko, sicebisa, ngaphezu kwako konke, ukuba uliqonde eli khefu njenge amava oza kufunda kuwo ukuphucula ubudlelwane bakho kwixa elizayo.
Sizicacisile iziseko ukuze uqale ukuqonda into ekufuneka uyenzile ukuba ufuna ukoyisa ukuphela kobudlelwane. Ngoku siza kukunika Iingcebiso ze6 ukukunceda ufike apho.
Iingcebiso ezi-6 zokoyisa ukuphela kobudlelwane
Iingcebiso zokoyisa ukuphela kobudlelwane
Musa ukuyifihla indlela oziva ngayo. Ukuzenza ngathi ulungile xa ungekho kunokuba yingozi.
Zifumanele kwakhona. Amaxesha amaninzi, asenzi imisebenzi esiyithandayo kuba ayihambelani neqabane lakho, ke, zivumele ukuba wenze imisebenzi emitsha kwaye uthathe izinto owazenza ngaphambi kobudlelwane bakho.
Cinga kwaye ucebe ikamva lakho. Qala ngezona njongo zilula kunye nemisebenzi emva koko udlulele kwezona zibalulekileyo.
Zikhathalele. Kuqhelekile ukuba umntu angazikhathaleli xa esiya esiphelweni sobudlelwane. Nangona kunjalo, xa uzikhathalele, ukuzithemba kwakho kuyanda.
Dibana nabantu abatsha.
Fumana inkxaso kubahlobo nakusapho.
Ukuba iyafuneka, themba inkxaso yengcali.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku malunga indlela yokoyisa ukuphela kobudlelwane iluncedo kuwe. Ukuba, ngokuchaseneyo, ukwimzuzu olungileyo kwaye ufuna ukudibana nomntu okhethekileyo, sicebisa ukuba ufunde indlela yokoyisa umfazi onzima. Kude ibe lilixa elizayo!